Gudoomiye ku xigeenka Aqalka Sare oo ka hor yimid war ay faafisay Shirkadda Spectrum Geo – Somali Top News
Gudoomiye ku xigeenka Aqalka Sare oo ka hor yimid war ay faafisay Shirkadda Spectrum Geo
June 4, 2019 June 5, 2019 Somali Top News	0 Comments
Guddoomiye ku xigeenka Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Abshir Maxamed Bukhari ayaa ka hor yimid war ay faafisay shirkadda Spectrum Geo ee Qandaraaska baarista shidaalka Somalia ka heysta dowlada Federaalka oo ku saabsan sharciga Batrtoolka dalka.
Qoraal uu soo saaray ayuu Abshir Bukaari oo ka mida mas’uuliyiinta ku kacsan madaxda dowladda Federaalka ku faahfaahiyey qaabka loo maro ansixinta sharciyada, wuxuuna sheegay inuusan sharciga batroolka ansixin, iyadoo aan la horkeenin Aqalka Sare, isagoo ugu baaqay shirkadda Spectrum inay saxdo warka ay boggeeda ku faafisay.
In sharci kasta oo qabyo ah ee la horkeeno mid ka mid ah labada Gole ee Baarlamaanka
Federaalka Soomaaliya uu maro golaha kale ee Baarlamaanka Federaalka iyada oo la raacayo habraaca dastuuriga ah oo si faahfaahsan loogu qeexay Qod.82aad iyo Qod.83aad ee Dastuurka KMG ah.
Soomaaliya si waafaqsan Qod.82aad, Qod.83aad iyo Qod.90aad(f) ee Dastuurka KMG ah; si uu uga dhigo SHARCI dhaqangal ah.
← Askari katirsan ciidanka dowladda oo gabar da’yar ku dilay magaalada Jowhar
Kenya threatens to use force against Somalia over border wall →
Mareykanka oo sheegay in duqeyntii ugu dambeesay lagu dilay xubno shabaab ah
Dowladda Federalka oo amar ku soo rogtay hay’adaha iyo Safaaradaha ku shaqeeya xerada Xalane